Iwe unosuwa bhatani repamba here? Saka iwe unogona kugadzira iyo chaiyo | IPhone nhau
Iwe unosuwa bhatani repamba here? Saka iwe unogona kugadzira iri yechokwadi
Alvaro Fuentes | | iOS 11, iPhone
Kubviswa kwebhatani repamba pa iPhone X chisarudzo chakakosha chakaitwa naApple sevamwe vashandisi veManzanita smartphone vanogona kunzwa kusafara Nekuda kwenzira yavaishandisa kubata chishandiso, nebhatani rayo rekutanga, uye nzira nyowani yatinofanirwa kugadzirisa zvekare, pasina bhatani rakakomborerwa.
Neraki, vashandisi ava vane mhanza, kubvira bhatani repamba harina kupera zvachose. Iyo iOS inoshanda sisitimu inokutendera kuti uwedzere chaicho chimwe uye inogadziriswa pahwindo rako. Tichaedza kutsanangura zvakajeka maitiro ekuigonesa pane yako iPhone X.
AssistiveTouch hachisi chinhu chitsva muIOS uye vashandisi vazhinji vakatora mukana weichi chinowanikwa chemakore mazhinji. Asi ikozvino, Apple's AssistiveTouch system inotora chinzvimbo chitsva pane ichangobva kuburitswa iPhone X iyo isina bhatani repamba mukufarira imwe nyowani yekuita-yakavakirwa pamba bhawa. Kushandisa yekutanga bha chinhu chitsva sezvo ichiunza mikana yakawanda yekubata chishandiso uye inoda kuti vashandisi dzidza zvakare kudzidza kubatana ne iPhone yako nyowani. Nepo vashandisi vazhinji vachizojairana, vamwe vangangosarudza nzira yavaimboshanda nayo uye vachida kuwedzera bhatani reKumba kumashure panzvimbo pechiratidzo chetsva. Apa ndipo panoita AssistiveTouch izvo: kwete iwe chete inokutendera kuti uve necompact icon muchimiro chebhatani repamba pachiratidziri, asi inogona kugadziridzwa kuti ishande zvakafanana neiyo bhatani repamba repamusoro, kusanganisira refu-pinda kuti uite Siri kana kaviri-pombi kuti uite mawindow emawindo, sezvaanga achingoita. pane iPhone mamodheru ayo achine imba bhatani.
Kugonesa AssistiveTouch, unofanirwa kutevedzera anotevera matanho atinotsanangudza pazasi. Chekutanga, vhura iyo Zvirongwa app wozoenda ku General. Pashure vhura menyu Accessibility uye pfugama pasi kuti uwane iyo yakamirirwa kwenguva refu AssistiveTouch. Pamusoro, shandisa basa uchishandisa switch inoratidzwa pachiratidziri.
Kana iwe uchida kuti ishande zvakafanana neiyo bhatani repamba pane yako yekare iPhone, iwe unozofanirwa kunyura mune zvetsika zviito. Kuzvigadzirisa, tinofanirwa kusarudza zvinotevera: mu Kubata kumwe cheteSarudza kudzidziswa. Nekuti Kubata mavirisarudza Multitasking. Pakupedzisira, ye kwenguva refu kumanikidzwa, unofanira kusarudza Siri.
Uyezve, kana iyo nyowani Control Center nzvimbo isiri yako yaunofarira (ikozvino yave kuwanikwa nekusvetuka kubva kumusoro-kurudyi kona yekona), unogona kushandisa AssistiveTouch kuti ugadzire kukurumidza kuwana kune izvozvo zvakare. Kuti uite izvi, isu tiri kuzokupa iwe mirairo yekuteedzera kumisikidza kwayo: mu 3D TouchSarudza Kudzora nzvimbo uye kubva ipapo, iwe unogona kuiwana usinga tsvete chigunwe chako pasi kubva pamusoro pekona.
Iwe unogona zvakare kugadzirisa opacity yeiyo AssistiveTouch chaiyo imba bhatani kuti ive yakajeka uye isavharidze zvirimo zvakawandisa. iOS 11 inokutendera kuti udzikise kuoneka kweAssentialTouch kusvika padiki se15 muzana kana isiri kushandiswa, kuitira kuti isapinda munzira kana uchishandisa zvimwe zvirimo pachiratidziri.
Chekupedzisira, kana iwe uchida kuti yako iPhone ishande zvakangofanana sepakutanga, iwe uchafanirwa tinya uye ubatise bhatani reAssiveiveTouch kuidhonza. Iye zvino, unogona kuiisa pazasi peiyo iPhone X skrini iri pakati, uye uchave uine ruzivo rwunozove rwakanyanya kujairika uye rwakafanana nezvawakararama kare nefoni yako. Iwe unogona kutosiya base application isina chinhu kuitira kuti iwe usavanze chero maficha pane iyo skrini yepamusha.
Kubviswa kwebhatani repamba uchifarira kugadzira bhari yekumisikidza kunowedzera mukana wekubata kweiyo iPhone X, asi vashandisi vazhinji vanoona zvichishamisa uye zvakaoma kuenderana nazvo. Tinovimba mhinduro iyi ndeyekuda kwako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Iwe unosuwa bhatani repamba here? Saka iwe unogona kugadzira iri yechokwadi
LOL! vakangoziva vhiri huh
Ini handina kunyatsonzwisisa maitiro avakaita kuti iratidzike semufananidzo. Mumwe munhu anoziva? Ndatenda!
Iyo iPhone X inowana akanakisa mamaki emifananidzo maererano neDxOMark
Mifananidzo yekutangwa kweiyo iPhone X yakaonekwa kubva kuApple pachayo